Fiiri Mashiinka Mobile ee 100 - Geofumadas
Indho at Mobile Mapper 100
Sebtember, 2010 GPS / Qalabka, aragti ugu horeysay
Ugu dambeyntii Ashtech waxay soo bandhigtay qaabka cusub ee kooxda, taas oo lagu soo bandhigay Shirka Caalamiga ah ee ESRI, dhowaan la yiraahdo Mobile Mapper 100, taas oo ah horumar leh sifooyinka Mashiinka Mobile Mobile 6 laakiin leh caddayn ka sareeya kuwa ProMark3.
In jiritaan, tani waa kooxda Waxaan ku tirinayaa in Magellan lagu haysta doonaa sannadaha soo socda, waxaa ugu dambeyntii jabiyo nidaamka this xiran PM3 oo sida xaqiiqada ah waa dameer in ay ka shaqeeyaan laakiin kooban waxa aan ka dhan warsan.
Dhibicda Promark3 waa inuusan u oggolaan in codsiga dhinac saddexaad ah, ee loogu talagalay kiiska ArcPad. Inkasta oo ciyaarta sahlan ee shaashadaha leh tirada tirooyinka indhaha awoowe ayaa aad u macquul ah.
Sidoo kale Hantidhowrku wuxuu lahaa xaddidaad ay ku raran yihiin raajo caadi ah, haddii aysan ahayn mid ikhtiyaar ah. Haddii kale waa koox weyn, haddii fiilka lagu daaweeyo xannaano, taas oo durbadiiba na siisay hal maalin.
Ka dibna MobileMapper 6 waxay ku koobnayd inay noqoto qalab aan taageereynin laba jeer, inkastoo ay taageertey dib udhigista, xaqiijinta saxnaanta sub-mitirku waa kooban tahay. Midna ma noqon karo saldhig iyo ka dibna tirada cabbirka ee jirtey, waxay u muuqataa in ay dhaxlaan 100.
Waa maxay ugu fiican MM100
sax. Shaki kuma jiro tani waa midka ugu qiimaha badan, inkastoo kooxda ay ku dhowdahay US $ 5,000. Ku dhowaad 2,000 wax ka badan oo ah Ballanqaad iyo afar jeer waxa MM6. Inkasta oo ay hubiyaan in la helo qaab-u-habeyn lagu hayo xogta qoryaha iyo hoosta hoose ee ilaalinta sarreeya:
Dhamaan Saacadaha Saacadaha 50 ee waqtiga dhabta ah SBAS, in ka yar saacaddaha 30 waqtiga dhabta ah ee DGPS iyo in ka yar hal mitir oo leh dib u habeyn ama dib u habayn ama RTK.
GNSS muuqaalkeeda. Fursadaha kala duwan ee saxda ah ee kala duwan ayaa ah hal-abuurka ugu weyn marka la barbardhigo MM6 iyo xitaa PM3:
45 waa isku mid siman oo dhan
DGPS, RTK iyo dib-u-dhejinta Xafiiska MobileMapper
Waxaad ku kaydin kartaa xog qaas ah oo saldhig u ah, isla markaana waxay noqon kartaa Rover.
Xayeysiinta NMEA 183
RTCM2.3, RTCM3.1, CMR iyo CMR +, DBEN,
ATOM (Tani waa mawjada Ashtech oo lagu magacaabo "Optimized Messaging")
Taageerada macluumaadka xisaabta ee RTK-ga ee saddexaad: VRS, FKP, MAC
Windows. In luqadaha 11 iyaga ka mid ah Isbaanish, kaas oo aad ku ordi karto ArcPad wixii codsi kale ama codsi navigation oo ku socda Windows Mobile 6.5.
Software dheeraad ah. Waxay la socotaa Mashiinka Moobaylka kaas oo ah codsi ku saabsan Ashtech, GNSS Toolbox ee kantaroolka GNS, Mapping Field iyo Microsoft Office Mobile. Marka laga reebo Internet Explorer, ActiveSync iyo Transcriber si loo aqoonsado aqoonsiga.
Marka la eego isku xirnaanta, waxay u keentaa sida MM6 Bluetooth, laakiin waxay hore u taageertaa Wireless 802.11. Waxay sidoo kale taageertaa saldhigga saldhiga.
Maadaama MM6 keeno kamarad, dareeraha maskaxda, mikrofoon si loo badbaadiyo loona hadlo.
Waxay la socotaa kaarka MB-ka 256 iyo batoonka lithium horay ayaa loo soo dalacayaa saddex saacadood. Intaa waxaa dheer, adeggu ma aha wax shisheeye ah laakiin waa farsamoyaqaan caalami ah.
Gaaban, qalab subarmric-waqti dhab ah. Ilaa laga soo bilaabo taariikhda, waa inaan sugnaa magaca ciyaarta, maadaama ay ka mid tahay Promark 100 iyo Promark 200, kaas oo aan fahamsanahay inay isku mid yihiin, laakiin antenna iyo software-yada geodesy. Midka ku kala duwan waa mashiinka Mobile Mobile 10, oo dib loo eegayo aad u ballaaran oo isku xiran.
Maaha wax xun, inkastoo ay tahay inaad isku daydo. Magellan wuxuu u dhacaa inuu noqdo Ashtech, ka dibna mar kale wuxuu noqonayaa Magellan oo u muuqda inuu bilaabi doono xasillooni, inkastoo uu qaatay hab ama mid ka mid ah wakiil ka mid ah labada magac. Laakiin laga soo bilaabo waayo-aragnimooyinka xun ee MMPro, waxaanu ka helnay awood taageero oo ka wanaagsan Ashtech, waxaana rajeyneynaa in Promark3 uu u boodayo kooxahan aan macnaheedu ahayn in ay gebi ahaanba ka fogaanayaan heerka uu ku dhacay Pro.
Wanaagsan Pro, laakiin foojignaan maareeya khaladaadkooda.
ESRI GPS My aragti ugu horeysay
Post Previous«Previous Farmville, ugu fiican ee ciyaaraha online
Post Next Alibre, ugu fiican ee 3D design farsamoNext »
31 Jawaab in "Fiiri Mashiinka Mobile 100"
Anigu waxaan leeyahay farriin tayo leh iyo qalabka gnsska ah ma arki karo isku-duwidda macaamilka, ma ogtahay sida loo qaabeeyo?
Milton MILLADO CIPRIANO isagu wuxuu leeyahay:
Agoosto, 2016 at
Waxaan ka socdaa Peru. Waxaan helay GPS SPECTRA L1 DIFFERENTIAL GPS, laakiin kaliya waxay la shaqeysaa qalabka GPS-ga Waxaan rabaa inaan ogaado sida ay u shaqeyneyso GLONASS.
HEBER isagu wuxuu leeyahay:
WAA LAGU SAMEEYAA INAAN SAMEEYO MADAXWEYNE 100, LAAKIIN MA KARO SIDII KM KM AYAAN KU SHAQAAN KARAA SOCODKA POST. Waxaan rabaa inaan dhaho UJEEDDADA QODOBADA xakamaynta, KELIYA QODOBADA XANUUNKA QAASKA KU SAMEEYAAN LAGU SIIN KARAAMO KHATARTA KHATARTAADA.
qarsoodi la'aan isagu wuxuu leeyahay:
wanaagsan sida in marka rarka 2 100 GPS MobileMaper aad u muuqataa mid ka mid iftiin jaalaha ah iyo iftiin kale cas ee kooxdiisa waa in aanay ka muuqan sida midab isku mid iftiinka ...
Juan Romero isagu wuxuu leeyahay:
hello Waxaan u baahanahay casharro ku jira fiidiyowga maareynta barnaamijka loogu talagalay geedi socodka lugta ah ee Isbaanish waa xalalka gsnn
hello Waxaan u baahanahay tababbarro fiidiyow ah si aan u maamulo 100 khadka ah ee Spanishka ah
ma i siin karaan jihada qaar
Rafael Saez isagu wuxuu leeyahay:
Faafaahintu waxay ku saabsan tahay su'aasha sahanka aad rabto inaad weydiiso iyadoo la adeegsanayo qalabka '100 promarck' iyo qalabka kale ee GPS, waxaad u baahan doontaa inaad u beddesho feylasha qalabka kale ee aan ku xirneyn faylka RINEX ka dibna aad ku sameysid dib-u-habeyn barnaamijka GGSS ee xalka ASterch. nasiib wacan
Hada, sida ku saabsan ... Anigu halkan halkaan ma joogin ... laakiin ma garanayo haddii ay wali tahay waxtar leh ... haddii aad dhab ahaan haysato liisanka shaqada kadib ... waxay si gaar ah u iibisaa ...
george isagu wuxuu leeyahay:
Subax wanaagsan waxaan jeclaan lahaa in aan ogaado sida dib-u-qabashada dibedda lagu sameeyo xNUMX mobile mapper ama horyaalka si loo arko hababka iyo mahadnaqa
Waxaan ubaahanahay qiyaasta inay i caawin karto
Waxaan leeyahay 6 mapper molibe ah oo aan awood uma yeelan in la sameeyo geeddi-socodka post-processing, dhawaan waxaan bartay in barnaamijka ama software waxaa u sharciyeysan howshan habka post waa mid kale, sida sanduuq activola cuendo gasho guud xogta sida xawliga ah u post-processing, waxaan ka heli liisanka run ma aha.
GOOBAHA HOOSE KU SAABSAN
Waxaan leeyahay 6 mapper molibe ah oo aan awood uma yeelan in la sameeyo geeddi-socodka post-processing, dhawaan waxaan bartay in barnaamijka ama software waxaa u sharciyeysan howshan habka post waa mid kale, sida sanduuq activola cuendo gasho guud xogta sida xawliga ah u post-processing, waxaan ka heli liisanka run ma aha, maxaa yeelay, waxaa la qeybinayay software ah.
Mke Mke waad iga caawin kartaa caawinta Brirndarme ee tan
Waxaan rajeynayaa in faallo laga bixiyo
Salaan, waxaan ka imid wadanka Kolombiya, oo kooxda khiyaanada leh ay igula taliso inaan u isticmaalo sida rover, oo leh saldhig saldhiga u ah postprocess aad u fiican oo ah saldhig maxalli ah, waan xusayaa sababta oo ah waxay u tahay cabbirada topograafiga ah ee dhulka banaan ee socodsiinta howlaha tusaale ahaan (Waxaan u isticmaalaa saxanka geesoodka waana ku dhex jiraa Waxaan dhigayaa pro asal ahaan halka aan ku wareegayo hareeraha leh MM100 kadib faylka labada rover iyo salka aan u isticmaalo kiiskan waxaan sameeyaa postprocessing ...) tusaalaha noocan ah ee ah inaad Rover kugula taliso inaad igu siiso natiijooyin si sax ah u weyn oo ku saabsan dib u dhigista
ama haddii aad hayso fikrad wanaagsan oo ku saabsan sida loo sameeyo baaritaanka aan hore u soo sheegnay
Su'aal kale haddii aan ku sameeyo habkan oo kale ayaa loo isticmaali karaa in lagu xiro isuduwayaasha
ama aad kugula talin lahayd inaad iibsato laba MM100 si aad u isticmaashid mid kaamil ah iyo mid kale oo ah rover, oo aad u mahadsantahay dareenka la bixiyay
Annagu ma iibinno. Waa inaad ka heshaa dalkaaga qaybiyaha.
johann silva isagu wuxuu leeyahay:
Waa imisa kharashka iyo habka lacag bixinta
wilma del rocio barragan clavijo isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan codsanayaa xigasho, habka lacag bixinta, keenista deg degga ah ee qalabka, taas oo dammaanad qaadeysa inay bixiyaan, haddii la heli karo, Mobile Mapper 100, Mobile Mapper 10.
Cadaadiska holland hernandez isagu wuxuu leeyahay:
khariidadda xawaaraha 100 waxay u adeegtaa saldhigyada daraasada topographic
Maya, ma jiraan.
juanma isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan doonayaa in aan ogaado haddii ay jiraan wax codsadaha moobaylka ah oo loo isticmaali karo ipad ama iifoon
Haa way awoodday, laakiin saxnaantu kuma filna. Staking waxay ubaahantahay sentimitir ama millimitim sax ahaanta, qaasatan hadii ay tahay shirqoolo.
Thanks for your comments, waxay iga caawisaa badan oo ka soo Mexico iyo hambalyo boggan nasiib leh
Aan aragno inaan fahamsanahay qaybaha:
-Arrimaha GPS Mobile 100 waxay u baahan tahay liisanka ka-dib-u-shaqeynta, si ay xogta ay u qaataan loo hagaajin karo iyadoo la isticmaalayo habkan.
- Mar walba waxay noqon doontaa mid sax ah in dib loo dhigo xogta ka soo horjeeda xogta la qaato qalab kale ama xogta maxaliga ah marka laga reebo xogta Rinex.
-In boggan waxaa jira maqaalo badan oo tilmaamaya sida dib-u-dhiska dibedda loo marayo iyadoo la isticmaalayo Xafiiska Khariidadda Mobile Mobile, iyadoo la adeegsanayo Khariidadaha Moobilada iyo Xafiiska Khariidadda Mobile.
maalin wanaagsan ayaad iga caawin kartaa fadlan su'aalaha qaarkood:
Waxaan leeyahay 100 MobileMapper la ArcPad ... laakiin waxaan u postprocessing aad ii talinaynaa in shatiga postprocessing si ay u sameeyaan hagaajin xiga on my PC ama aan kala soo bixi kartaa xogta RINEX in ay mar dambe ku xerin oo aan haysan si ay u bartaan postprocessing liisanka ... ama igu badan yahay kuwa caqliga leh in ay iibsadaan ama code postprocessing soo baxa isku mid leh ama aan lahayn code firfircoon ... .haddii code la shaqeysiin aan code hawshooda u ma ii sheegi kartaa sida loo sameeyo postprocessing ka dator RINEX hoos, isbadal xogta RINEX in Ashtech kor xogta isku aadka labada GPS iyo siinayaa xog RINEX ... ama waa habka Xafiiska MobileMapper.
horaantii kun oo mahadnaq ah iyo salaan ka yimid mexico
Subax wanaagsan, su'aashaydu waa haddii MM100 aan fulin karo saamaynaha aasaasiga ah, sida tusaale ahaan daneeyayaasha sirqoolka, dabcan waxay ku quudinayaan dhibco dhab ah.
Waxay kuxirantahay dalabka aad rabto. Caadi ahaan qorsheynta dhulku waa ku filan tahay (cabirka qormada), haddii xogta dib loo dhigo, laakiin haddii ay tahay shaqo altimetry ah, sida abuurista sahaminta dhulka ee naqshadda waraabinta ama u-diyaarinta darajada waddada, saxnaanta sare u qaadista Kuma filna, maxaa yeelay waxaa jira toban sintimitir marka laqeelayo kanaalka ama calaamadeynta goynta.
Wixii ah shaxanka, waxa habboon waa saldhigga guud, teetano caadiga ah ama heerka saxda ah.
Rochin isagu wuxuu leeyahay:
Hi G. Waxaan leeyahay kooxda prosproceso MM6, waxaad u malaynaysaa in kooxda this runtii MM100 gaadhi karo sax sida, puediera funsionar in sida qalabka a qaadista lagu kalsoonaan karo? Topograficos ... Thanks
Waxaan ku talin lahaa Garmin GPS Map 62st. Ma aamminaan Magellan. Waa shuruuddayda.
Ujeedooyinkaas, qalabka ayaa si fiican u shaqeynaya.
Botanical isagu wuxuu leeyahay:
Anigu waxaan ahay botanist, uma baahnin qadarinta daraasad, waxaanan u maleynayey Magellan Triton. Maxaad u maleyneysaa?
Gabi ahaanba waa run. Xadhiggu wuxuu u muuqdaa mid aad u daciifa qaybta ku xirnaata anteenooyinka, waxay ubaahantahay daryeel badan.
Sida USB cable ee isugeynta xarunta, haddii ay tahay midka waalan, waxaa hubaal ah inuusan mar dambe shaqeyn doonin. Way qaali yihiin in iyaga loo gato shaqsi ahaan, marka laga reebo inay iyagu soo galaan haddii jiritaanku uusan jirin.
Waxay ahayd waqtigii ay qaadeen dhammaan arrimahaas. Qalabka qalabkani waa fiilooyinka.
salaanta oo dhan
Mario Roberto Argeñal isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan haystaa MM6 waxaanan ku shaqeeyaa xaalado shaqo oo si fiican u shaqeynaya, waqtigaana qalabkani waa mid aad u fiican oo aad waxtar u leh gaar ahaan dadka waayeelka ah, hambalyo ku saabsan abuurista cusub, sii soco.
Ilaahay ha u duceeyo All-